Milkiilayaasha Liverpool Oo Xaqiijiyay Inay Ceyriyeen Tababare Kenny Dalglish. - jornalizem
Milkiilayaasha Liverpool Oo Xaqiijiyay Inay Ceyriyeen Tababare Kenny Dalglish.
Milkiilayaasha kooxda Liverpool ayaa xaqiijiyay inay ceyriyeen tababare Kenny Dalglish.
Dalglish ayaa ka qeybgalay kulan ka dhacay Boston dalka Mareykanka oo uu kula kulmay milkiilayaasha kooxda, kulankaasoo aan ku dhamaanin sidii la rabay, waxaana ay keentay in shaki la geliyo mustaqbalka tababare Dalglish.
Si kastaba, qandaraaskiisa ayaa la burburiyay caawa, ka dib markii ay milkiilayaasha sheegeen inay si taxadar ku jiro ay u qiimeyeen xilli ciyaareedkii la soo dhaafay islamarkaana ay go’aan ku gaareen inay isbedel ku sameeyaan kooxda.
Dalglish ayaa xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee dhameystiran oo uu Anfield ku soo laabto waxa uu kooxda u qaaday Carling Cup, sidoo kalena Liverpool waxa ay gaartay finalka FA Cup, lakiin Premier League ayay ku dhameysteen kaalinta 8aad.
Tababaraha ayaa sidoo kale aad loogu dhaleeceeyay sida uu u la macaamilay kiiskii ku aadanaa Luis Suarez iyo Patrice Evra, taasoo sababtay in Suarez lagu ganaaxo sideed kulan.
Ka tagitaankiisa kooxda ayaa waxa ay qeyb ka tahay isbedelo dhanka maamulka ah oo Liverpool lagu sameynayo, ka dib markii dhawaan la ceyriyay agaasimaha kubada cagta Damien Comolli iyo madaxa waaxda caafimaadka Peter Brukner.
Dalglish ayaa ka mid ah xiddigii ugu waa weynaa ee soo mara kooxda ciyaaryahan ahaan iyo tababare ahaanba, isagoo tababare ahaan kooxda la qaaday seddex horyaal iyo labo FA Cup ka hor inta uusan shaqadaas iska casilin Febraayo 1991.